Goobaha Lacag-bixinta ee Real Money - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah
(565 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Lacagta dhabta ah ee lacagta loo yaqaan 'real Money' waxaa lagu ciyaaraa inta badan astaamaha-dhulka ee adduunka laga isticmaalo, inkasta oo guriga gurigu ku yaal ciyaarta uu ka duwan yahay kan khamaarka ilaa kan ku xiga. Aagagga ciyaarta tooska ah, farqiyadaan ayaa had iyo jeer u kala jaba qaaradda, in kasta oo magaalooyin ama gobolo qaarkood ay bixin karaan fursado fiican oo ciyaar. Waxa ay tahay inaad ogaato inay jiraan kala duwanaansho aad u kala duwan oo ku aaddan farqiga aad ku heleyso, sidaa darteed baro waxa nooc kasta oo ka mid ah noocyada muhiimka ah ee roulette ay kuu soo bandhigto. Inta maqaalka uu socdo, waxaan ka wada hadli doonaa ikhtiyaarada ugu waaweyn adiga. Markaad dhammeysato, waa inaad ogaataa waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato si aad u gaarto go'aanno wanaagsan.
Ciyaarta Mareykanka & Jarmalka
European roulette waa nooca ciyaarta oo ay caan ku yihiin casinos ku taal magaalada Monte Carlo ee ku taal magaalada Monaco ee caasimada Faransiiska Riviera. In kasta oo fikradaha guud la wadaago, qoob-ka-ciyaarka yurubiyanka ah ee aan ahayn nooca asalka ah ee ciyaarta. Hawl wadeennada ciyaaraha ee Yurub badhtamihii qarnigii 19aad waxay bilaabeen inay bixiyaan hal-eber ciyaaraha si ay macaamiisha u khiyaaneeyaan, iyagoo ka gudbaya dhaqan laba qarniyo ah oo ah ciyaar laba jibaar ah. Haysashada hal baaldi eber ah ama jeebka shaashaddu waxay faa iido weyn u leedahay khamaarlaha, maxaa yeelay inta badan kubbadaha giraangiraha badankood waa kuwa lumiya marka kubbaddu ku dhammaato mid ka mid ah jeebadaha 0. Sababtaas awgeed, guriga 2.70% geeska Yurub waa roulette Yurub aad uga fiican nooca Mareykanka ee ciyaarta.
Qoob-ka-ciyaarka Mareykanka ayaa si aad ah ugu eg qaabkii asalka ahaa ee ciyaarta maadaama lagu ciyaaray qarniyadii 17th iyo 18th. Ka sokow jeebabka loogu talagalay lambarrada 1 illaa 36, giraangiraha ayaa sidoo kale ku jira boorarka 0 iyo 00. Mar labaad, ku darista jeebka dheeriga ah ee jeebka yar waxay yareysaa fursadahaaga guusha. Cidhifka guriga waa 5.26% on American ama Las Vegas roulette, kaas oo sidoo kale loo yaqaanno laba-eber roulette. Xaaladaha badankood, waxaad dooneysaa inaad ka fogaato ciyaartan, haddii ay suurtagal tahay. Marar dhif ah, waxaad ka heli kartaa qawaaniin ka turjumaya mala awaalkaas. Markii aadan hubin, ciyaar adiga oo adeegsanaya giraangiraha Yurub.
Markaad ku ciyaareyso lacagta dhabta ah ee qoob ka ciyaarka qoob-ka-ciyaarka iyo baaruudda, waxaad ogaan doontaa in qoob-ka-ciyaarka mareykanka lagu ciyaaro inta badan woqooyiga Ameerika, halka ciyaarta Euro lagu ciyaaro meel kasta oo kale oo adduunka ah. Qaar ka mid ah casinos-yada Las Vegas Strip waxay bixiyaan hal-eber roulette meelo gaar ah oo ka mid ah dabaqyadooda ciyaarta waqtiyo gaar ah inta lagu jiro usbuuca, inta badan sida cayaaraha doolarka sarreeya oo leh uguyar $ 25 ama ka badan. Gacan yar oo ka mid ah casrigan Vegas Strip waxay bixiyaan mararka qaarkood $ 15 roulette Yurub ah, in kasta oo laga yaabo inaad booqato waqti cayiman toddobaad kasta si aad u ciyaarto cayaaraha. Dadku waxay internetka ku soo daabaceen in in yar oo ah Tunica, Casisyada Mississippi ay bixiyeen ciyaar hal eber ah waqtiyadii la soo dhaafay, laakiin taasi uma muuqato in xaalku hadda yahay.
In Atlantic City, sharciyada New Jersey waxay ku qasbayaan casinos inay bixiyaan sharciyo gaar ah oo ku saabsan roulette-ka Mareykanka. Xeerarkan waxaa lagu magacaabaa "la partage", oo ah faransiis loogu talagalay "qaybaha" ama (luqadda Mareykanka) "qayb ahaan". Muxuu qaanuunkaan sameeyaa waxaa weeye waxaad lumineysaa kalabar sharadkaaga markii aad sameysid xattaa lacag lacag ah isla markaana kubbadu ku degto booska 0 ama 00. Markaa haddii aad sameysay $ 20 oo sharrax ah hi / lo, casaan / madow, ama xitaa / soojeedin aan caadi ahayn oo kubbadda ay ku dul degto eber, waxaad kaliya waayi doontaa $ 10. Tani waxay kalabar guriga ka dhigeysaa xitaa lacagta lagu shubo 2.63%, taas oo ka dhigaysa noocaan ah roulette-ka Mareykanka inuu yahay mid waxyar ka roon roon kan Yurub. Nasiib darrose, dhowr ka mid ah casinos-yada loo yaqaan 'Boardwalk casinos' ayaa hadda bixiya "Rapid Roulette", oo bixisa isla sharciyo wanaagsan (oo sidaas ku qancinaya sharciyada New Jersey), laakiin lagu ciyaaray xawaare ka dheereeya ciyaarta caadiga ah. Sidaad qiyaasi laheyd, tani waxay kugu soo bandhigeysaa qarka guriga marar badan saacaddii, taas oo kordhinaysa celceliska macaashka saacadda saacaddii.
Roulette waa mid ka mid ah kuwa kulan miiska in la siiyaa oo kaliya in casinos in dalalka qaarkood. Tusaale ahaan, dhigayaa sida Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, iyo Illinois leeyihiin casinos kuwaas oo bixiya ciyaarta. (In the case of Georgia, aad raadinayso ee doonyaha casino halkii ay leben dhabta ah iyo casinos hoobiye.) Florida bixisaa ciyaarta nooca-roulette ah, laakiin sababta oo ah sharciyada gobolka, ay dhab ahaantii ma tahay loo ogol yahay in ay tahay in wac.
Markaad ku cayaarto roulette-ka lacag-bixinta dhabta ah ee khadka tooska ah, waxaad inta badan ka heleysaa xiriirro dhinac-iska-dhexyaal ah oo Mareykan iyo Yurub ah. Xulashada ciyaar ay ciyaareyso waa iska cadahay (ciyaari Euro ciyaarta), ilaa aad ogaatid in khamaarka uu leeyahay sharciyo gaar ah oo doorbidaya ciyaarta USA. Inta badan waqtiga, xiriiriyaha ayaa si fudud u siiya ciyaartoyda xulashooyinka, iyagoo rajeynaya in kuwa aan aqoonta lahayn ee khamaarka u dhashay Mareykanka iyo kuwa Kanada ay ciyaaraan nooca dhaqanka Mareykanka ee ciyaarta, iyagoo u maleynaya inay ka fiican tahay. Si ka duwan khamaarka tooska ah, howl wadeenku waa inuusan ciyaarin shaqaale dheeri ah si uu ula macaamilo cayaarahaan, marka waa lacag yar ama kharash la'aan (waxay kuxirantahay bixiyaha softiweerka) si loo bixiyo xulashada ciyaarta dheeriga ah.
Mar labaad, haddii aad ikhtiyaar u leedahay labadaas oo aadan aqoon waxa sharciyadu yihiin, ku ciyaar nooca Yurub ee la bixiyo. Fursaduhu waa, waa ikhtiyaarka ugu fiican. Waa inaan sheegaa in roulette-ka yurub ee lacagta dhabta ah ee bixisa xeerarka "la partage" (ama la mid ah "xabsi" / xeerar xabsi) ay yihiin nooca ugu fiican ee aad ciyaari karto. Tani waxay hoos u dhigeysaa geeska guriga ilaa 1.35%, taas oo u dhiganta ciyaaraha sida craps iyo baccarat. Si kale haddii loo dhigo, qaabkan gaarka ah ee ciyaarta wuxuu leeyahay qaar ka mid ah caqabadaha ugu wanaagsan ee ciyaar kasta oo ka mid ah khamaarka internetka oo aan lahayn wax istiraatiijiyad ah. Baccarat, craps, iyo roulette waxay u muuqdaan inay leeyihiin istiraatiijiyad yar oo lagu xasuusto (ka sokow ogaanshaha khamaarista la sameynayo), sidaas darteed waxay bixiyaan fursadaha ugu fiican iyaga oo aan u baahnayn inay wax bartaan oo ay sii ahaadaan kuwo fiiqan halka khamaarka.
Roulette Wagers - Inside Qooqinta
khamaar Inside waa kuwa ka dhigay on tiro hal ama kooxo yar yar oo tiro ku xiran. Waxa ay u yeedhay gudaha khamaar ah sababtoo ah chips sharadka aad waxaa la geeyaa gudaha qaabka tirooyinka. bet toosan ku lug leedahay hal lambar oo hal, oo aad meel ayaan kuugu soo qori si toos ah on tirada. bet Kala la sameeyo tiro 2, iyo waxa uu kaalinta on line ka kala kuwa laba tiro. bet wadada wuxuu ka kooban yahay lambarada 3 oo isku xiga, sida ay 1-2-3 ama 4-5-6. Waxaad u dhigi doonaa bet this on line ka baxsan tirada kuwaasoo kala horreeyaan iyo, tan iyo tirooyinka ku jira haadka gaaban, waxaa loo bixin wadada.
Sii liiska khamaar gudaha, geeska ama Bawdada bet ku lug leedahay tirada 4. afar lambar waa jareyso, oggolaanayo in aad meel chips halkaas oo afarta rukun oo wada midaysan. bet dambiil waa sharad 5-tiro in roulette American, oo ay ku lug 0, 00, 1, 2, iyo 3 ah. Ha ka Yeelina u bet dambiisha, sababta oo ah waxa uu leeyahay qalmay ugu xumaa ee ciyaarta, waxa uu leeyahay ku laayeen guri 7.89%. Ugu dambeyntii, jidka double ama bet isku xigta ku lug leeyihiin laba khamaar ah wadada ku xiga hal mar. Waxaad u dhigi doonaa chips on line u dhexeeya labada jidadka, mar kale dhinaca ka baxsan xigxiga tirada.
Roulette Wagers - Qooqinta ee ka baxsan
Halka khamaarista gudaha ay ku lug leedahay 6 ama nambar ka yar, khamaarista banaanka waxay ku lug leedahay sharad 12 ama lambarro badan markiiba. Waxaad dhihi kartaa sharaddan waxay ku saabsan tahay noocyada nambarada. Sababtoo ah lambarro badan ayaa la isku dhejiyaa, fursadaha ku guuleysiga khamaarradani way ka weyn yihiin kuwa ku jira gudaha, in kasta oo lacag bixintu ay yar yihiin. Maskaxda ku hay in (ka sokow sharadka sanduuqa), dhammaan khamaaristayaasha khamaaristu waxay leeyihiin isku qallafsanaan, illaa aad isticmaaleyso sharciyo gaar ah. Sharadka "laba iyo tobanka" waxaa ka mid ah sharad ku saabsan 1 illaa 12, 13 illaa 24, ama 25 illaa 36. Sameynta sharad xitaa lacag ah waxaa ka mid ah sharad ku saabsan soo jeedinta sare / hoose, soo jeedinta cas / madow, ama soo jeedinta / xitaa . Waxay ugu yeeraan wagers-yadaas lacagta ah maxaa yeelay waxay iska bixiyaan 1: 1, laakiin maskaxda ku hay inaadan haysan 50% fursad aad ku garaacdo, sababtoo ah joogitaanka 0 boosaska taayirada.
khamaar Column waa khamaar 12-tiro on mid ka mid ah saddex kooxood oo tiro. Qaabka Tirada ka mid ah tiirar 3 tirada 36, sidaas column kasta waxay leedahay tiro 12 waxa ku jira. Tusaale ahaan, mid ka mid column ku lug lambarada 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34. Waxaad u dhigi wagers kuwan hoose ee column kasta. Ugu dambeyntii, waxaad samayn kartaa sharad mas on hannaankii serpentine tirooyinka oo crisscross khariidad ah. tiro ka mid yihiin 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34. In kastoo aad maqli doonaa dadkan wac bet sucker ah, maxaa yeelay, aad si fudud u sharad hal unug on kasta oo ka mid lambaradan sida aad si kale, waxa aanu xaq u lahaa qeexidda, maxaa yeelay, qalmay isku on sharad this.
Roulette Online for Money Real
At casino kasta online waxaad ka heli doontaa online, mid kasta oo wagers kuwan waxaa la siiyaa in xirmo software ay. Doorashada dhexeeya gudaha ama dibadda bet runtii waxay leedahay dheeraad ah in la sameeyo inta jeer ee aad rabto in aad ku guuleysato iyo inta aad bixisay marka aad samayn. Haddii aad hesho daraasiin caajiso sugitaanka ee dhigeeysa inuu ku guuleysto bet ah, markaa waa in aad ciyaaro wagers ka baxsan. Haddii aad hesho waxa ka xiiso badan in ay leeyihiin lamoodaa weyn, markaa waa in aad ciyaaro wagers gudaha. Ka sokow bet sanduuqa, oo dhan wagers leeyihiin laayeen guriga isla, sidaas darteed ma filan si aad u hesho faa'ido istaraatijiyad dooranaayo bet in ay isku dayaan.
Haddii aad rabto si ay u falanqeeyaan u qalmay aad ka soo baxaysa aragtida kale, in kastoo, inaad naftaada u sheegto in guriga uu leeyahay ku laayeen aad ku wareejin kasta, sidaas oo kale ayaa dhigeeysa yar waxaa jira, nasiib badan iyo kuwa aan jaaniska saamayn doonto natiijada. In seenyadaa, waxa macno more in meel la siiyo gudaha, tan aad ku guuleysan karo 35 ah: heshay 1 on wareejin 20th (tusaale ahaan) iyo iska leh heshay fiican ku socdaan. Haddii aad qaawi, waayo 1: 1 iyo 2: lamoodaa 1, aad jeeda laayeen guriga marar badan ka. Dabcan, gelinayn ku wagers gudaha ka dhigan tahay waxa aad helaysaa badan oo fadhiyada meesha aad lumiso farabadan of khamaar oo waxba si ay u muujiyaan aad ciyaaraha leeyihiin, sababtoo ah waa aan ka bixin su'aal u leedahay in 50 in 100 dhigeeysa qaadan meel aan hal lambar gaar ah weligiisba garaacid. Haddii ay taasi tirada aad sharad, waxaad waayi doonaa tan ah ee lacagta.
The tixgelin kor ku xusan ma khuseeyaan marka aad u ciyaareyso la partage ama xabsi xeerarka la soo sheegnay, sababta oo ah, kuwaas oo kala badho laayeen guriga ku siiyo in xitaa lacag, laakiin kaliya siiyo in xitaa lacag. Haddii aad u ciyaareyso kuwan xeerarka ka mid ah Yurub ama American roulette lacagta dhabta ah, waa qawl ka fiican in mar walba ka dhigi siiyo in xitaa lacag on cas / madow, sare / hooseeyo, ama xataa / cajiib ah.
2.1 Ciyaarta Mareykanka & Jarmalka
2.4 Roulette Wagers - Inside Qooqinta
2.5 Roulette Wagers - Qooqinta ee ka baxsan
2.6 Roulette Online for Money Real